आगामी निर्वाचन जित्न १४ औं महाधिवेशनको भूमिका महत्वपूर्ण - Bidur Khabar
विदुर खबर २०७८ असोज ५ गते १२:५२
नुवाकोट । नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पार्टीलाई सशक्त बनाएर आगामी निर्वाचनमा तीनै तहमा नेपाली कांग्रेसलाई विजयी बनाउन १४ औं महाधिवेशनको ठूलो भूमिका रहने बताउनुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४ र ५ को १४ औं वडा अधिवेशनको उद्घाटन मन्तव्य दिंदै सह–महामन्त्री डा. महतले सो कुरा बताउनुभएको हो । अलग अलग आयोजित दुवै वडा अधिवेशनमा प्रमुख अतिथि रहनुभएका सह–महामन्त्री डा. महतले नेपाली कांग्रेसको हालको लक्ष्य आगामी आम निर्वाचन जित्ने रहेकोले त्यस अनुरुपको संगठन निर्माणमा क्रियाशील सदस्यको ठूलो भूमिका रहने उल्लेख गर्नुभयो ।